Ra’iisul Wasaaraha XFS oo Guddi u saaray Masiibada Baladweyne – Radio Muqdisho
Ra’iisul Wasaaraha XFS oo Guddi u saaray Masiibada Baladweyne
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa maanta guudi ka kooban 22 Xubnood u saaray musiibada ka taagan magaalada Baladweyne ee Xarunta Gobolka Hiiraan, taasoo ka dhalatay fataahadda uu sameeyay Wabiga Shabeelle.
Gudiggan uu mudane Xasan Cali khere u saaray masiibadaasi ka taagan Magaalada Bladweyne ayaa ka kooban 22 xubnood, kuwaa soo isugu jiro Wasiiro ta tirsan Xukuumadda Soomaaliya , Xilidhinaanno iyo Bulshada Riyadka.
Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali khere ayaa sheegay in Dowladda Soomaaliya ay dadaal kasta ku-bixneyso sidii Dadkaasi loo badbaadin lahaa, isagoo shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay in ay usu gurmadaan.
Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa dhanka kale maanta Guddiga Arrimaha Bulshada ee Golaha Wasiirada iyo Hay’adaha Deeq bixiyaasha ee ka howlgalo Soomaaliya kala hadalay Masiibada xiligan ka taagan Gobolka Hiiraan gaar ahaan magaalada Baladweyne,si looga jawaabo Fatahaadda Wabiga Shabelle.
kulankaasi ayaa inta uu socday diiradda lagu saarayaa habka looga jawaabayo Saameynta fatahaadda iyo sida ugu dhaqsiyaha badan ee shacabkaasi gargaar loo gaarsiin karo.
Ra”iisul Wasaare Kheyre oo kulan looga hadlayo Fatahaadda Wabiga Shabelle la qaatay Guddiga Arrimaha Bulshada ee Golaha Wasiirada
Guddiga Joogtada ah ee Golaha Aqalka sare oo maanta qodobo muhiim ah ka hadlay+Sawirro